HomeỤWAAsia98 IranIhe ọghọm ụgbọ oloko na Iran, 4 nwụrụ anwụ 35 merụrụ ahụ
Ihe ọghọm ụgbọ oloko na Iran, 4 nwụrụ anwụ 35 merụrụ ahụ
26 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 98 Iran, Asia, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General 0
ụgbọ ihe mberede merụrụ ahụ na ireland
Hedgbọ okporo ígwè Zahedan-Tehran nke Iran merụrụ ahụ. Dịkarịa ala, e gburu ndị 4 na ndị 35 merụrụ ahụ n'ihe ọghọm ahụ.
Iran nke Sistan na Balochistan na mpaghara Zahedan na Başknet Tehran na-aga n'etiti ụgbọ oloko na-ebufe njem. Dabere na akụkọ mbido, ndị 4 gbuchara mmadụ 35 merụrụ ahụ n'ihe ọghọm ahụ.
Onye isi Director nke State Nsogbu Desk Abdulrahman Sehnvazi kwuru na ụgbọ oloko ahụ mebiri emebi n'ihi ọtụtụ uzuzu n'okporo ụzọ ụgbọ. Şehnvazi kwupụtara ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ anwụ na ndị merụrụ ahụ ma ziga ndị enyemaka, helikopta na ụgbọ ihe mberede na mpaghara ahụ. Aidlọ Ọrụ Enyemaka Ahụike Iran kwuru na ọnọdụ ndị merụrụ ahụ dị arọ ma ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ nwere ike ịba ụba.
E mere nchọpụta nyocha megide ihe mberede ahụ.
Na-azụ ihe mberede na Germany: 3 nwụrụ, 13 merụrụ ahụ 15 / 04 / 2012 E gburu ndị mmadụ 3 n'ụgbọ okporo ígwè ahụ na nso obodo Offenbach na Germany taa mgbe etiti abalị. Ụgbọ okporo ígwè ahụ, nke sitere na Frankfurt ruo Hanau, mere ka ọkwọ ụgbọ okporo ígwè na-aga n'okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè na Offenbach Mühlheim. N'ime ihe mberede ahụ, e gburu mmadụ abụọ n'ụgbọ okporo ígwè na bulldozer. Nchebe Offenbach kwupụtara na e weghaara 13 n'ụlọ ọgwụ. Ka ha na-enyocha ihe mberede ahụ, a chọpụtara na ọmụmụ banyere ihe mberede ahụ mere. A chọtara ndị njem 6 na ụgbọ okporo ígwè dị n'etiti Frankfurt na Hanau. Isi: Oge
Na mberede ụgbọ okporo ígwè na Argentina, 3 nwụrụ anwụ na-egbu 100 14 / 06 / 2013 Ụgbọelu ụgbọ okporo ígwè na Argentina: 3 nwụrụ n'ụgbọ okporo ígwè na isi obodo Argentina bụ Buenos Aires nke nwere ọtụtụ ndị merụrụ ahụ karịa 100. 3 nwụrụ n'arụ ụgbọ okporo ígwè na isi obodo Argentina, Buenos Aires nke dị na, ma ihe karịrị ndị na-aga 100 bụ ndị merụrụ ahụ. Ndị ọchịchị, n'ụtụtụ ụtụtụ na mpaghara Moron nke ụgbọ okporo ígwè na-esite n'ọdụ ụgbọ mmiri 2, ụgbọ okporo ígwè dị n'etiti ogige 2 mara ọkwa na ụgbọ ala ọzọ. Mgbe ihe mberede ahụ gasịrị, ụfọdụ ndị njem na ụgbọ oloko sitere na nke aka ha ma gwa ndị ọchịchị ka ha mụtara. Ndị agha na-abanye na mkpochapụ ahụ napụtara site na ndị ọrụ nchọnchọ na ndị nnapụta zigara ebe ahụ. Ruben Sobrero, onye ndú nke Railroad Union, bụ 6 nke abụọ na-agagharị ụgbọ okporo ígwè
Ihe mberede okporo ụzọ na Argentina, 3 nwụrụ anwụ site na 100 15 / 06 / 2013 Train okuku na Argentina, 3 nwụrụ anwụ xnumx'ler nke merụrụ ahụ ụgbọ okporo ígwè na mberede na Argentina isi obodo Buenos Aires, 100 ndị gburu, ihe karịrị 3 njem e kọrọ merụrụ ahụ. Ọchịchị 100 akụkọ nke a COMMUTER ụgbọ okporo ígwè na n'isi ụtụtụ awa nke Moron mara ọkwa na ọ gburu ụgbọ okporo ígwè ọzọ kwụsịrị n'etiti ụgbọ 2. Mgbe ihe mberede ahụ gasịrị, ụfọdụ ndị njem na ụgbọ oloko sitere na nke aka ha ma gwa ndị ọchịchị ka ha mụtara. Ndị agha na-abanye na mkpochapụ ahụ napụtara site na ndị ọrụ nchọnchọ na ndị nnapụta zigara ebe ahụ. Railway Union ndú Ruben Sobrero, okpukpu abụọ suburban ụgbọ oloko na ojiji bụ nke 2 ọnwa, ọ sịrị a ụbọchị ole na ole gara aga na-amalite na-akpa ọzọ n'ihi na nke njupụta nke oge. Front ...
6 nwụrụ anwụ, 200 merụrụ ahụ na ụgbọ okporo ígwè na France (Video) 13 / 07 / 2013 6 nwụrụ na France, 200 merụrụ ahụ: Otu ụgbọ okporo ígwè nke dịpụrụ adịpụ na mpaghara Essonne nke dị na ndịda Paris, France. Ndị njem ụgbọ okporo ígwè 6 si Paris gaa Limoges ma jiri 370 merụọ 22. Paris Austerlitz okporo ígwè site na-akpụ akpụ ụgbọ okporo ígwè si ebe, nke Teoz nọmba 60 obodo oge, 3657: 17 ewere ọnọdụ n'etiti ndị na-akwụsị Brétigny-sur-Orge ọdụ, na ụgbọ okporo ígwè ugbala 14 7 ugbala derailed. 4 abanyewo na nchekasị siri ike site na ịda site na wiil ndị dị iche iche si n'ụgbọelu ndị njem. Ụfọdụ ugbo ala nwere ike ịgafe nrịgo elu nke 370 n'ogologo n'ụzọ dịka Bazı
Na ebe ụgbọ okporo ígwè 1 nwụrụ, 2 merụrụ ahụ 21 / 08 / 2013 Nkuzi 1 na-aga agha, 2 merụrụ ahụ: nne na ụmụ ya na-agbalị ịfefe okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè ahụ ụgbọ okporo ígwè ahụ. Mama na ụmụaka gbalịrị ịgafe ụmụ abụọ na okporo ụzọ okporo ígwè na Germencik district nke Aydın. Nne nke otu ọnwa, nne nwụrụ n'apata ya, nne na nwa nwanyị ọzọ merụrụ ahụ. Ihe mberede ahụ mere na ọnọdụ 4 nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị na Germencik. Nazilli-Soke oge a njem ụgbọ okporo ígwè, ibudatara na ụgbọ okporo ígwè akwa-achọ ịgafe Şükriye Duru (18.00) na na-emi odude na-esote Edanur (30) na 5-ọnwa agadi na nwa kụrụ Ecrin Duru. Site na mmetụta nke 4 kwa ọnwa Ecrin, ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị
Minista Turhan, 'Silzọ Ọgbara Ọhụụ na-enweta ike'
Kedu ihe mere na Şanlıurfa Trambus Project?
Na-azụ ihe mberede na Germany: 3 nwụrụ, 13 merụrụ ahụ
Na mberede ụgbọ okporo ígwè na Argentina, 3 nwụrụ anwụ na-egbu 100
Ihe mberede okporo ụzọ na Argentina, 3 nwụrụ anwụ site na 100
6 nwụrụ anwụ, 200 merụrụ ahụ na ụgbọ okporo ígwè na France (Video)
Na ebe ụgbọ okporo ígwè 1 nwụrụ, 2 merụrụ ahụ
Ugbo agha na Egypt: 24 nwụrụ anwụ, 28 merụrụ ahụ (Video)
Na-akụ azụ na mpaghara Ilgin nke Kony: 1 Dead, 1 Injured (Video)
Na United States ụgbọ okporo ígwè 7 nwụrụ anwụ, 12 merụrụ ahụ (Video)
Na India ụgbọ okporo ígwè 11 nwụrụ merụrụ 42
Ụgbọala ụgbọ okporo ígwè 13 nwụrụ anwụ, 150 merụrụ ahụ